Microsoft Office 365 - MTGNIC
Microsoft Office 365 ဆိုတာ ဘာလဲ ? ဘာတွေ အားသာချက်ရမလဲ ?
Microsoft Office 365 ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ နေ့စဉ် အသုံးပြုနေတဲ့ office application တွေဖြစ်တဲ့ Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Skype, OneDrive စတာတွေကို Cloud Application အဖြစ် မည်သည့်နေရာ မည်သည့် စက်ကနေမဆို အသုံးပြုနိုင်ပြီး ၎င်း Cloud ပေါ်ရှိ မိမိ ဒေတာများကို စနစ်တကျ လုံခြုံစွာ သိမ်းဆည်းပေးသော စနစ်တခုဖြစ်ပါတယ်။
၁။ ဆာဗာ ကို ထိန်းသိမ်းစောင့်လျောက် နေရတဲ့ တာဝန်တစ်ခု မလိုတော့ပါဘူး။
Office 365 ကို Cloud ပေါ်မှာ အသုံးပြုနိုင်ပါပြီ။ သင့်အနေနဲ့ သင့် ရုံးတွင်းမှာ ရှိနေတဲ့ ဆာဗာနဲ့ တွဲသုံးချင်တယ် ဆိုရင်လဲ ရပါသေးတယ်။ တကယ်တမ်း Cloud ပေါ်မှာ အသုံးပြုခြင်းဖြင့် သင့်အနေနဲ့ Physical ဆာဗာ တစ်လုံး ကို ပုံမှန် Maintain လုပ်နေရတဲ့ ကုန်ကျစရိတ်များ ပြင်ဆင်စရိတ်များ လျော့ချပြီးသားလဲ ဖြစ်မှာပါ။
၂။ စနစ်အဟောင်းက ဒေတာတွေ ထားခဲ့စရာမလိုပါဘူး။
ဒေတာ Migration အတွက် စိတ်မပူပါနဲ့ Office 365 မှာ Migration အတွက် လွယ်ကူတဲ့ function တွေပါပါတယ်။ အားလုံးအသစ်က ပြန်စ စရာမလိုတော့ပါဘူး သင့် ဒေတာများ Migrate လုပ်ဖို့အတွက် ကိုယ်တိုင် ဆောင်ရွက်နိုင်သလို MTG မှ Technical Support Team မှလဲ အခမဲ့ ကူညီ ဆောင်ရွက်ပေးနေပါတယ်။
၃။ Cloud ပေါ်ကနေ ရုံးတက်နိုင်ပါပြီ။
Cloud ပေါ်မှာ Office application တွေ အားလုံးရှိနေပါပြီ။ သင်နဲ့ သင့်မိတ်ဆွေတွေ စားပွဲဝိုင်းတစ်ခုတည်း အတူထိုင်ပြီး ရုံးအလုပ်တွေလုပ်နေသလိုမျိုးကို သင့်အနေနဲ့ အပြင်သွားရင်းဖြစ်ဖြစ် ကော်ဖီဆိုင်ထိုင်ရင်းဖြစ်ဖြစ် ပါလာတဲ့ ဖုန်း၊ တက်ဘလက် တွေကတစ်ဆင့် ဆက်သွယ် လုပ်ဆောင်နိုင်နေပါပြီ။
၄။ တန်ဖိုးရှိတဲ့ဒေတာများ ဆုံးရှုံးမှုမှကာကွယ်ပေးခြင်း။
ကုမ္ပဏီ တစ်ခုအတွက် ဒေတာတွေ စာရွက်စာတမ်းတွေ ဆိုတာ အသက်သွေးကြောတစ်ခုပါပဲ။ ဒီလို အရေးကြီးတဲ့ ဒေတာတွေ ပျောက်ဆုံး ပျက်စီးသွားတာမျိုးကတော့ တကယ့်ကို အိပ်မက်ဆိုးကြီးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ Microsoft Office 365 တွင် သင့်ရဲ့ အသက်တစ်မျှ အရေးကြီးတဲ့ ဒေတာများအား ဆုံးရှုံးမှုမှ ကာကွယ်ရန် Backup များပြုလုပ်ထားနိုင်ခြင်း၊ 99.9% uptime Guaranteed ဖြင့် Service Level Agreement (SLA) ပေးထားခြင်း စသည့် အားသာချက်တို့ကို ရရှိနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
Business Business Essentials Business Premium ProPlus F1 E1 E3 E5
Install Office on up to5PCs/Macs +5tablet +5smartphones per user Business3- Business3ProPlus4- - ProPlus4ProPlus 4
Access to Office apps and documents from all major smartphones and iPad ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
OneDrive for Business - personal online document storage 1 TB 1 TB 1 TB 1 TB2GB New 1 TB 1-5+ TB 1-5+ TB
office Mobile Apps - Create/view/edit rights for online version of office apps ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Office Online - Create/view/edit rights for online versions of core office apps ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Sway for Office 365 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
PowerApps and Flow ✓ ✓ ✓New ✓ ✓ ✓
Team collaboration & internal portals (SharePoint), Internal social networking (Yammer) ✓ ✓ ✓15 ✓ ✓ ✓
Microsoft StaffHub - Shift scheduling, content sharing and workgroup messaging New ✓ New ✓ New ✓ New ✓ New
Email - 50 GB email, contacts shared calendars (Exchange) ✓ ✓2GB ✓ ✓ ✓
Skype for Business, Microsoft Teams - Conferencing, meetings, IM/presence, chat-centered workspace ✓ ✓ ✓ New ✓ ✓ ✓
Microsoft Stream ✓ New ✓ ✓ ✓
On-premeses Active Directory synchronization for single sign on ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Mobile Device Management (MDM) for Office 365 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Access to equivalent on-premise servers (Exchange, SharePoint, Skype for Business) ✓ ✓ ✓
Legal compliance & archiving needs for email - archiving, eDiscovery, mailbox hold ✓ ✓
Information protection - message encryption, rights management, data loss prevention ✓ ✓
Enterprise Voice w/Skype for Business (on-prem only) ✓
Advanced Compliance, Secure Attachments and URLs, Access Control, Advanced Security Management ✓
Data analystics and visualization (Power BI Pro), end user and team analytics (MyAnalytics) ✓
PSTN Conferencing ✓
For Inquiry the Office 365 Quotation
Please contact to our sales team info[at]mtg.com.mm or Call +959420043928
Copyright © 2019 MTGNIC. All rights reserved.